Midowga Afrika oo soo dhaweeyay ka bixistooda AMISOM garoonka Stadium Muqdisho | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Midowga Afrika oo soo dhaweeyay ka bixistooda AMISOM garoonka Stadium Muqdisho
Midowga Afrika oo soo dhaweeyay ka bixistooda AMISOM garoonka Stadium Muqdisho
Muqdisho-(SNTV)-Howl-galka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ayaa soo dhoweeyay tallaabada ay Ciidankoodu ugu saarayaan Garoonka weyn ee Stadium Muqdisho.
Ergeyga gaarka ah ee Midowga Afrika u jooga Soomaaliya Amb, Francisco Madeira, ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka, ku sheegay inuu ammaanayo qorshaha lagu banneynayo Garoonka, isagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin in uu dib ugu laabto Gacanta Soomaaliyeed.
Ciidanka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ayaa billaabay Sacadihii la soo dhaafay in ay ka guuraan Garoonka Stadium Muqdisho, kaas oo muddo ka badan 10 Sano fariisin u ahaa.
Garoonka ayaa la dhisay Sanaddii 1978-dii, kaas oo lagu qabsan jiray in badan oo ka mid ah ciyaaraha Sportiga sida Kubbadda Cagta, Kolayga, Miiska, Dabaasha iyo kuwo kale oo badan, iyadoo sidoo kalena ahayd goob muhiim u ah isu imaatinka Bulshada xilliyada ay jiraan Munaasabadaha.
Stadium Muqdisho ayaa soo maray marxalado kala duwan oo ay sababeen dagaalladii sokeeye ee Dalka ka dhacay, waxaana tallaabadan ay kaga baxayaan Ciidanka AMISOM aad ugu riyaaqay bahda Sportiga iyo qaybaha kala duwan ee Bulshada Soomaaliyeed.
Previous articleMadaxweynaha JFS iyo Wafdi uu Hogaaminayo oo gaaray dalka Jabuuti
Next articleG/Shacabka oo kullan la qaatay Hay’adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Qaranka